Wakiilka Adeegyada Diiwaangelinta (Laba luqood) - Cunnooyinka Lugaha
U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan U gudub Navigation
Ku deeq Hada
Deeq bixiyeyaasha Billaha ah
Ku deeq deeq
Siyaabo Kale Oo Wax Loo Siiyo
CUNNO U KAALAY
Wax dheeri ah baro
Kheyraadka Dadka Waaweyn
Ku saabsan Cunnooyinka
Ka Qayb Qaado
NALA SOO XIRIIR
Wakiilka Adeegyada Diiwaangelinta (Labada-Luuqad)
Metro Meals on Wheels waxay doonaysaa inay ku darto wakiilka Adeegyada Diiwaangelinta Saaxiibtinimada iyo bixidda ee macaamiisha, barnaamijyada xubnaha iyo daryeelayaasha marka ay u qoraan macaamiisha cuntada guriga lagu keeno. Wakiilka Adeegyada Diiwaangelinta ayaa ka caawin doona macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira fursadaha ay ka heli karaan bulshada dhexdeeda, oo gacan ka geysan doona socodsiinta nidaamka. Shakhsigani waxa uu yeelan doonaa xirfado isgaarsiineed oo heer sare ah, iyo rabitaan uu u qabo caawinta kuwa bulshadeena ah. Maaddaama Metro Meals on Wheels ay sii waddo ballaarinta wacyigelinteeda bulshada dhexdeeda, booskani wuxuu u baahan yahay inuu si fiican ugu hadlo Ingiriisi iyo Soomaali, Hmong ama Isbaanish labadaba.
Waajibaadka Muhiimka ah
Wuxuu ugu yeeraa xubnaha bulshada ee degan aagga Twin Cities inay bixiyaan macluumaad ku saabsan Cunnooyinka shaagagga iyo ilaha dhaqaale / taageerada.
U fidiso wacyigalin bulshada dhexdeeda ah oo ka faa'iideysan doonta helitaanka Cunnooyinka Gawaarida.
La shaqee wadashaqeyn hay'adaha kale si ay isugu dubbarido adeegyada.
Go'aamiso u-qalmitaanka maaliyadeed ee Medicaid ee xubnaha iman kara. Ku caawi barnaamijka Medicaid sida loogu baahdo, soo aruurinta xaqiijinta maaliyadeed ee ku habboon, arjiga dalabka una gudbi caddeynta gobolka.
Bixiyaan helitaanka gargaarka tarjumaadda / tarjumaadda.
Waxay siisaa caawimaad fool-ka-fool ah xubnaha bulshada si loo fududeeyo Cunnooyinka isqorista Cagaarta.
Samee baaritaanka u-qalmitaanka marka loo baahdo.
La xiriir maamulayaasha dacwada iyo barnaamijyada Cunnada ee Wheels.
Hesho macmiil sax ah oo ku saabsan tirada dadka, dhaqaalaha iyo caymiska.
La xiriir Cunnooyinka xubnaha ka ah boggaga si loo fududeeyo keenista Cunnooyinka Guriga La Gaarsiiyay.
Ka jawaab su'aalaha guud ee ku saabsan Cuntooyinka Lugaha Lugta iyadoo lala xiriirayo daryeelayaasha iyo dadka qaata.
La shaqee Madaxa Suuqgeynta MMOW si aad u bilowdo olole baraha bulshada ah oo bulshada lagu barayo Cuntooyinka Lugaha Lugta.
Raadinta xogta iyo warbixinta tirakoobka markii loo baahdo.
Kaqeybqaado munaasabadaha Cunnada Wheels, iyo shirarka hay'adda.
Waajibaadka kale ee loo xilsaaray.
Waxbarasho iyo Khibrad
Waxbarasho, waayo-aragnimo ku saabsan Adeegyada Aadanaha iyo Bulshada, shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee shaqada bulshada, ama khibrad u dhiganta.
Xirfadaha, Aqoonta, iyo Awoodaha:
Laba luuqadood oo Ingiriisi iyo Soomaali ah, Hmong ama Isbaanish.
Xirfadaha hadalka iyo qoraalka ee wanaagsan.
Aqoonta iyo fahamka MN Medicaid iyo nidaamka dalabka.
Adeeg macmiil oo heer sare ah, abaabul iyo xirfado dabagal ah.
Aqoonta siyaasadaha iyo habraacyada u hoggaansamida HIPAA.
Aqoon u leh adeegsiga barnaamijyada kombuyuutarka ee Microsoft Office; MS Word, Excel & Muuqaalka, iyo khibrada keydka macluumaadka.
Maareyn waqti wax ku ool ah, iyo karti u leh mudnaanta mudnaanta socodka shaqada.
Awood u leh inuu si madax-bannaan u shaqeeyo isla markaana ka mid noqdo koox.
Awood u lahaanshaha shaqada fog iyo xafiiska.
Xirfad iyo edeb leh.
Awood u leh inay si wax ku ool ah uga shaqeyso hay'ad howl-wadeen ah oo macaamiisheeda iyo shaqaalaheeda ay muujiyaan kala duwanaansho weyn marka loo eego jinsiyadda, isirka, u janjeedha jinsiga, xaaladda dhaqan-dhaqaale, dhalasho, iyo diin.
Ruqsadaha iyo / ama Shahaadooyinka:
Waa inuu helaa gaadiid la isku halleyn karo, laysanka darawalnimada ansaxsan ee Minnesota iyo caymiska.
Waa inuu awoodaa inuu dhaafo baaritaanka asalka.
Fiiro gaar ah: Sharaxaadkan shaqadani waxba kuma xadidayaan xaqa maamulku u leeyahay inuu u xilsaaro ama u qoondeeyo waajibaadka iyo masuuliyadaha shaqadan wakhti kasta.
Meesha furan ilaa la buuxiyo. Si aad u dalbato warqad caymis oo dib ugu noqo Mary Plasencia at [email protected].
Metals Meals on Wheels waa Loo shaqeeye Fursad Siman / Xaqiijin ah umana takoori doono qof ku saleysan jinsiyad, diin, asal qaran ama jinsi ku xad gudbaya cinwaanka VII. Metro Meals on Wheels waxay mamnuucaysaa takoorka ka dhanka ah shaqaalaha, codsadayaasha shaqada ee ku saleysan da'da, jinsiyadda / midabka, naafonimada, xaaladda guurka, asalka qaran, diinta, jinsiga, aqoonsiga jinsiga, nooca galmada, xaaladda qoyska, macluumaadka hidaha ama xaaladda halyeeyga. Ficil QAADO SHAQO, SHAQAALO FURSAD LEH M / FH DV.
Nala soo xiriir:
Tel: (612) 623-3363
Fakis: (612) 331-9401
1200 Washington Avenue S.,
Suite 380, Minneapolis, MN 55415
Nagala soo xiriir:
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Websiteka | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Amniga | Khariiradda Website-ka
© Xuquuqda daabacaadda 2022 Metro Food on Wheels. Dhammaan Xuquuqda Ayadaa leh
Site by Brandography